Vaovao - Ny milina fanangonana atody tsara kalitao MINTAI dia mivarotra tsara sy mahomby amin'ny asany
MINTAI milina fanangonana atody tsara kalitao dia amidy tsara sy mahomby amin'ny asany
Ny milina fanodinana atody tsara kalitao MINTAI dia mivarotra tsara amin'ny fahombiazany, ny endriny malefaka kokoa ary ny fikirakirana avo kokoa. Manao tsara kokoa izahay amin'ny antsipiriany rehetra momba ilay masinina.
Ny masininina mpanangona atody dia manampy ny toeram-piompiana na indostrian'ny fanodinana atody mitsitsy ny vidin'ny asa lehibe, zava-dehibe mba hahazoana atody fiarovana, fenitra ary fahasalamana ho an'ny mpanjifanao sy ny olon-drehetra.
MT 101-3 Mpanintona mpamory atody azo asiana fanasana atody, fanamainana atody, rafitra fanosorana menaka, fanamafisana UV, mpanonta atody sns hanomezana fitakiana samihafa. Rehefa avy nitantana moramora ny atody tamin'ity milina ity dia azo tehirizina mandritra ny fotoana maharitra koa ny atin'ny atody.
Raha te hitondra masinina mpametaka atody mahomby kokoa ianao, azafady mifandraisa aminay raha mila antsipiriany bebe kokoa.
Mpanamboatra masinina mamaky atody, Masinina mamaky atody mandeha ho azy, Masinina fanoratana atody,